Farira Kushanda Nesimba—Ita Zvinopfuura Zvaunotarisirwa
Nharireyomurindi | February 2015
SARUDZA MUTAURO Acholi Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Armenian (West) Aymara Bislama Bulgarian Catalan Cebuano ChiHmong (chinonzi cheWhite) ChiSutu (Lesotho) Chichewa Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chirungu Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Chiyao Chokwe Cibemba Cinyanja Croatian Czech Dangme Danish Drehu Dutch Efik Estonian Ewe Finnish French Ga Garifuna Georgian German Greek Guarani Haitian Creole Hebrew Hiligaynon Hungarian Icelandic Igbo Iloko Indonesian Italian Japanese Kazakh Kikamba Kikaonde Kikongo Kikuyu Kiluba Kimbundu Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Kisonge Kongo Korean Krio Latvian Lingala Lithuanian Luganda Lunda Luo Luvale Macedonian Malagasy Mam Mambwe-Lungu Maya Mazatec (Huautla) Mizo Mongolian Moore Myanmar Nahuatl (Central) Nahuatl (Huasteca) Ndebele (Zimbabwe) Nepali Ngabere Norwegian Nyaneka Nzema Ossetian Otetela Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Polish Portuguese Quechua (Bolivia) Rarotongan Romanian Runyankore Russian Samoan Sango Sepedi Serbian Serbian (Roman) Setswana Shona Sidama Silozi Sinhala Slovak Slovenian Spanish Sranantongo Swahili Swahili (Congo) Swedish Tagalog Tatar Thai Tigrinya Tlapanec Tok Pisin Totonac Tshiluba Tsonga Turkish Tuvaluan Twi Tzotzil Ukrainian Umbundu Vietnamese Wallisian Wayuunaiki Xhosa Yoruba Zande Zapotec (Isthmus) Zulu
NYAYA IRI PAKAVHA | ZVAUNGAITA KUTI UFARIRE BASA RAKO
Zvaungaita Kuti Ufarire Kushanda Nesimba
‘Munhu wose anofanira kudya, kunwa, uye kufadzwa nezvinhu zvakanaka pabasa rake rose rakaoma. Icho chipo chaMwari.’ (Muparidzi 3:13) Sezvo Mwari achida kuti tifarire basa redu, hazvina musoro here kuti achatiratidzawo zvatingaita kuti tirifarire? (Isaya 48:17) Zvinofadza kuti anotiratidza izvi achishandisa Shoko rake, Bhaibheri. Cherechedza mazano anotevera anobva muBhaibheri anogona kukubatsira kuti ugutsikane nebasa rako.
DZIDZA KUFARIRA BASA
Pasinei nekuti basa rako rinonyanya kuda kuti ushandise pfungwa, simba, kana kuti zvose zviri zviviri, ziva kuti “kushanda zvakaoma kwose kune zvakunobatsira.” (Zvirevo 14:23) Kunobatsira papi? Kushanda nesimba kunotibatsira kuwana chekurarama nacho. Ichokwadi kuti Mwari anovimbisa kupa vaya vanomunamata nemwoyo wose zvavanoda pakurarama. (Mateu 6:31, 32) Asiwo anotitarisira kuti tishande nesimba kuti tiwane chekurarama nacho tisingabiridziri.—2 VaTesaronika 3:10.
Saka tinogona kuona basa redu senzira yekuzadzisa zvirongwa zvedu. Kushanda inzira yakanaka yekuti tiite zvatinotarisirwa. Joshua, ane makore 25, anoti, “Kukwanisa kuzviriritira kunoita kuti ugutsikane. Kana uchikwanisa kubhadhara zvaunoda pakurarama, uri kushandira zviripo.”
Uyezve kushanda nesimba kunoita kuti ufare nezvaunenge waita. Asi kushanda nesimba hakusi nyore. Kana tikazvidzidzisa kuramba tiri pabasa redu, kunyange richiita sekuti rakaoma kana kuti harinakidzi, tinogona kugutsikana nekuziva kuti tiri kuita zvatinofanira kuita. Tinenge takunda hondo yekusada kushanda nesimba. (Zvirevo 26:14) Saka kushanda kunoita kuti tinyatsogutsikana. Aaron ambotaurwa munyaya yapfuura anoti, “Ndinofarira kanzwiro kandinoita kana ndaswera ndichishanda. Ndinogona kunge ndaneta, uye basa rangu rinogona kunge risina kucherechedzwa nevamwe, asi ndinoziva kuti ndinenge ndaita chimwe chinhu.”
ITA BASA RAKO NEMWOYO WOSE
Bhaibheri rinorumbidza murume ane “unyanzvi pabasa rake” uye mukadzi anofarira kushanda “nemaoko ake.” (Zvirevo 22:29; 31:13) Munhu haangavi neunyanzvi iye akagarira maoko. Uye vakawanda vedu hatifariri kuita zvinhu zvatisinganyatsogona. Pamwe izvi ndizvo zvinoita kuti vakawanda vasafarire mabasa avo. Vanenge vasina kuisa mwoyo wavo paari kuti vaaite nemazvo.
Muupenyu, tingatoti munhu anogona kudzidza kufarira chero basa kana achiriona zvakanaka, kureva kuti kana achiisa pfungwa dzake pakudzidza kunyatsoita basa racho nemazvo. William, ane makore 24 anoti, “Kana ukanyatsoita basa rako nemwoyo wose, paunoripedza, unonyatsonzwa kugutsikana. Haunzwi saizvozvo kana wariita uchidimbudzira kana kuti usina kuisa mwoyo wako wose pariri.”
FUNGA NEZVEKUTI BASA RAKO RINOBATSIRA SEI VAMWE
Rega kungofunga nezvekuti uri kuwana mari yakawanda sei. Asi zvibvunze mibvunzo yakadai seyekuti: ‘Sei basa iri richikosha? Chii chingaitika kana rikasaitwa, kana kuti rikasaitwa nemazvo? Basa rangu rinobatsira sei vamwe?’
Zvakanaka kuti tinyatsofunga nezvemubvunzo wekupedzisira, nekuti tinonyatsogutsikana nebasa redu kana tikaona kubatsira kwarinoita vamwe. Jesu pachake akati: “Kupa kune mufaro mukuru kupfuura kugamuchira.” (Mabasa 20:35) Kushanda nesimba kwatinoita kunobatsira makasitoma edu pamwe chete nevatinoshandira, asi panewo vamwe. Ivava vanosanganisira vemumba medu nevanoshayiwa.
Vemumba medu. Baba vemba pavanoshanda nesimba kuti variritire mhuri yavo, vanoibatsira munzira mbiri. Yekutanga, vanova nechokwadi chekuti vawana zvekurarama nazvo zvakadai sezvokudya, zvekupfeka nepokugara. Pavanoita izvi vanenge vachiita basa ravakapiwa naMwari ‘rekugovera vekwavo.’ (1 Timoti 5:8) Yechipiri, baba vanoshanda nesimba vanodzidzisa nemuenzaniso wavo kukosha kwekushanda nesimba. Shane ambotaurwa munyaya yapfuura anoti, “Baba vangu vanoratidza muenzaniso wakazonaka pakushanda. Vakatendeseka uye vashanda nesimba kweupenyu hwose, uye basa ravaita kwenguva refu nderekuveza. Ndakadzidza kwavari kukosha kwekushanda nemaoko ako, uye kugadzira zvinhu zvinobatsira vamwe.”
Vanoshayiwa. Muapostora Pauro akakurudzira vaKristu kuti ‘vashande nesimba . . . kuti vave nechimwe chinhu chokupa mumwe munhu anoshayiwa.’ (VaEfeso 4:28) Chokwadi, kana tikashanda nesimba kuti tizviriritire nemhuri dzedu, tinokwanisa kuzobatsirawo vanoshayiwa. (Zvirevo 3:27) Saka kushanda nesimba kunogona kuita kuti tiwane mufaro mukuru unovapo patinobatsira vamwe.
ITA ZVINOPFUURA ZVAUNOTARISIRWA
Mumharidzo yake yakakurumbira yepaGomo, Jesu akati: “Kana mumwe munhu ane simba akakumanikidza kuti uite basa kwemaira imwe chete, enda naye kwemamaira maviri.” (Mateu 5:41) Mashoko aya angashanda sei pabasa rako? Pane kuti ungoita zvishoma, tsvaga nzira dzekuti uite zvinopfuura zviri kudiwa. Iva nezvinangwa zvakadai sekuvandudza maitiro aunoita basa rako kana kuti kukurumidza kuripedza nguva yauri kutarisirwa isati yakwana. Nyatsoita nemazvo kunyange zvidiki zvaunoita pabasa rako.
Kana ukaita zvinopfuura zvaunotarisirwa, kazhinji kacho zvinoita kuti ufarire basa rako. Sei tichidaro? Nekuti unenge uchiita zvinhu uchizvisarudzira wega. Unoita izvozvo nekuti unoda kuzviita, kwete nekuti pane anenge achikumanikidza. (Firimoni 14) Panyaya iyi, tinogona kuyeuka mashoko ari pana Zvirevo 12:24 inoti: “Ruoko rwevanoshingaira ndirwo ruchatonga, asi ruoko rune usimbe ruchashanda basa rokumanikidzirwa.” Vashoma vedu vangaitwa varanda chaivo kana kuti vangamanikidzwa kushanda. Zvisinei, munhu anongoita zvishoma anganzwa sekuti muranda ari kungogara achiita zvido zvevamwe. Ukuwo munhu anozvisarudzira kuita zvinopfuura zviri kudiwa, haanzwe sekuti ari kumanikidzwa. Zvese zvaanoita anenge achizvisarudzira.
USAKOSHESE BASA KUPFUURA ZVIMWE ZVOSE
Zvakanaka kushanda nesimba, asi tinofanira kuyeuka kuti pane zvimwe zvinokosha kupfuura basa. Bhaibheri rinotikurudzira kushingaira. (Zvirevo 13:4) Asi harikurudziri kuti munhu agare achingoshanda chete. “Zviri nani kuzorora zvishoma pane kushanda zvakaoma zvakapetwa kaviri asi uchidzingana nemhepo,” inodaro Muparidzi 4:6. Tinodzidzei apa? Munhu anogara achingoshanda angatadza zvachose kumbonakidzwawo nemubayiro webasa rake kana richimusiya asisina nguva nesimba. Tingatoti kushanda kwacho kunenge kusingabatsiri kungofanana ‘nekudzingana nemhepo.’
Bhaibheri rinogona kutibatsira kuti tisakoshese basa kupfuura zvimwe zvose. Kunyange zvazvo richitaura kuti tinofanira kushanda nesimba, rinotiudzawo kuti tinofanira kuva “nechokwadi chokuti zvinhu zvinokosha kupfuura zvimwe ndezvipi.” (VaFiripi 1:10) Zvinhu izvozvo zvinokosha ndezvipi? Zvinosanganisira kuva nenguva yekuva nemhuri neshamwari. Uye zvinotonyanya kukosha ndezviya zvine chokuita nekunamata, zvakadai sekuverenga Shoko raMwari nekurifungisisa.
Vaya vanoziva zvinokosha muupenyu vanowanzofarira basa ravo. William ambotaurwa anoti, “Mumwe wevandaimboshandira anoratidza muenzaniso wakanaka pamashandiro aanoita. Anoshanda nesimba, anowirirana nemakasitoma ake nekuti anoita basa rake nemazvo. Asi panopera zuva, apedza basa rake, anoziva kuti anofanira kumbosiya zvekubasa ofunga nezvemhuri yake uye kunamata kwake. Asi pane chimwe chandakacherechedza paari. Murume iyeye anofara zvechokwadi!”
Maonero Anoita Vamwe Kushanda Nesimba
“Pandinonzwa ndakaneta ndabva kubasa, ndinonyatsogutsikana uye ndinofara. Ndinobva ndaziva kuti ndashanda nesimba zuva iroro.”—Nick.
“Kuti unakidzwe nebasa, unofanira kushanda nesimba. Kana uchida kuita chimwe chinhu, chiite nemazvo.”—Christian.
“Munhu anogona kuita zvinhu zvinoshamisa. Ndinoda kuratidza kuti ndinokoshesa upenyu hwandakapiwa nekushanda nesimba uye kubatsira vamwe.”—David.
Mazano 5 omuBhaibheri okukubatsira kuwana mufaro wechokwadi.
NYAYA IRI PAKAVHA Zvekushanda Nesimba Ndezvekare Here?
NYAYA IRI PAKAVHA Zvaungaita Kuti Ufarire Kushanda Nesimba
KUKURUKURA NEMUVAKIDZANI Sei Tichifanira Kuongorora Bhaibheri?
BHAIBHERI RINOCHINJA UPENYU Ndakafarira Chaizvo Mhinduro Dzakajeka Uye Dzine Musoro dzeBhaibheri
TEVEDZERA KUTENDA KWAVO “Kududzira Hakusi kwaMwari Here?”
Text Nzira dzokudhaunirodha nadzo mabhuku NHARIREYOMURINDI Zvaungaita Kuti Ufarire Basa Rako
Zvaungaita Kuti Ufarire Basa Rako
NHARIREYOMURINDI Zvaungaita Kuti Ufarire Basa Rako